विभिन्न सेट, टूट चश्मा, लुगा धुने भाँडा बाट व्यञ्जन मा खाना पकाउने, एक बेसिन रहिरहन्छ एक hotplate ... यस्तो depressing तस्वीर देश मा आफ्नो भान्सा को एक प्रतिबिम्ब हो भने, यसलाई तुरून्त परिवर्तन गर्न केहि समय छ। निस्सन्देह, जादू गरेर ग्याँस पाइपलाइन खर्च गर्न होइन तर यो कोठा आरामदायी र आरामदायक यो एकदम सम्भव छ बनाउन।
साम्राज्य गर्न, हाम्रो विचारमा, यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा उपयुक्त राम्रो पुरानो देश हो उच्च प्रविधी बाट तथापि, - देश मा भान्सा कुनै पनि शैली बनेको गर्न सकिँदैन।
सबै प्रजातिहरू देश शैली को मात्र प्राकृतिक सामाग्री प्रयोग जोडती - सेरामिक्स, माटो, काठ, कच्चा प्लास्टर, त्यसैले घरेलु आफ्नो भान्सा सफा क्षेत्र हुनेछ। साथै, प्राकृतिक सामाग्री प्रतिरोधी अत्यधिक तापमान हो, विकृत छैन, यसको मूल आकार राख्ने। भान्सा तल्ला भन्दा साधारण हुनेछ मा organically पाइन वा सजावटी पत्थर को floorboards, र छत काठ को गरे विशाल बीम र संरचना सजाउनु हुनेछ। यस्तो एउटा भित्री ठूलो काठको बेन्चहरूले, मल र काठ को चेस्ट हेर्न हुनेछ।
सबै भन्दा राम्रो विकल्प छ कि तपाईं निर्णय भने - यो आफ्नै हातले देश मा एक भान्सा छ, जुन धेरै राम्रो सजावटी प्लास्टर संग देख्यो संयुक्त पत्थर वा brickwork को तत्व, के। देश को शैली मा भित्री राम्रो (कपडा वा बांस को बनावट संग) painting लागि माटो टाइल र Vinyl वालपेपर पूरक छ।
सधैं होइन भित्री बारेमा आफ्नो कल्पनामा embody एउटा शहर अपार्टमेन्ट। मा, बुनना गर्न सी वा embroider आफ्नो क्षमता अभ्यास लागू यति सरल छैन। यसलाई हल्का, राख्न अनौठो, कहिलेकाहीं आधुनिक भित्री आवरण मा मुद्रा improvised। तर घरेलु - तपाईंको रचनात्मक विचार को प्रयोगमा कुनै बन्देज छन् ठाउँमा छ। त्यहाँ केही tinkering, पुरानो, सामान्यतया फर्नीचर संग प्रयोग सञ्चालन गर्न भनेर खुसी हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं गोंद संग लिंदा पछि, tabletops सजाने सेरेमिक टाइल्स को remnants प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं कपडा नजिक ध्यान यदि देशमा भान्सा, निकै परिवर्तन भयो। पुरानो र पहना कुर्सियों तिनीहरूलाई उज्यालो र मूल बनाउन, ब्यूँताउन सकिन्छ। यसो गर्न तपाईं, कपडा सही आकार टुक्रा आवश्यक आकार र बस्ने फर्नीचर स्ट्यापलर मा फोम ट्रिम। पनि ट्रिम सी सजिलो उज्ज्वल कपडा को कुर्सियों समेट्छ। एउटै कपडा पुरानो सोफा र थकित कुर्सियों ढांकना गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला, सबै भन्दा उपयुक्त plaid वा मुद्रित कपडा सानो फूल को ढाँचा संग।
हालैका वर्षहरूमा बरु सफलतापूर्वक अर्को "देहाती" स्वागत प्रयोग - छ देखि मंत्रिमंडलों वा sideboards ग्लास र हटाइएको आफ्नो टाल्ने ढांकना प्रतिस्थापन। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, रूपान्तरण गर्न त महंगा छ। तपाईं पनि अन्त मा तपाईं एक अर्थव्यवस्था वर्ग को एक उदाहरण दिन भान्सा प्राप्त भन्न सकिएन। हामी यो कोठा आफ्नो घर र अतिथिहरूको लागि मनपर्ने हुनेछ भनेर आश्वासन हिम्मत।
अर्को महत्त्वपूर्ण विवरण। पुष्टि गर्न भान्सा सम्भव छैन को बिरुवाहरु बिना छ। को समतल र तल्ला मा फूल बर्तन व्यवस्था, तर पहिलो एक सानो तिनीहरूलाई अद्यावधिक गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई सजाउनु रिबन, बेल, संग रंगीन बेल।
जूता लागि समतल। कसरी चयन गर्ने?
सोफा संयन्त्र: चयन गर्न के? सोफा तंत्र तह, "डल्फिन" cougar "," टिकटिक-tock "," पुस्तक "," sedafleks "प्रकार
लाउने तालिका - हरेक महिला लागि अवश्य
तह मल पिकनिक
सुजुकी Baleno: उत्पादन, डिजाइन सुविधाहरू सुरुमा, विनिर्देशों
Domodedovo एक उडानको लागि दर्ता कसरी गर्ने? कतै सजिलो
यसको कारखाना सेटिङहरूमा Android मा रिसेट
"Fenozepan" हो। सङ्केत गर्छ र वर्णन
रोमन बुडनिकोभ - एक जना पुरुष जसले "पहिलो च्यानल" मा प्रस्तुतकर्ताको रूपमा क्यारियर गर्न सफल भए।
Mousse-क्रीम hyaluronic एसिड संग "Merz": समीक्षा
विवाह कपडा बनाउने: रोचक विचार, सिफारिसहरू र समीक्षा
कसरी आफ्नो हात संग सरल र मौलिक बुकसेल्भ्सको बनाउन
उपयोगी सुझावहरू: कुन कुरामा नयाँ जन्मेको आवश्यकता छ
पोडोस्क, प्रदर्शनी हल: एक सारांश, घटनाहरु र प्रदर्शनियों, काम घण्टा, मूल्य